मदन भण्डारी जिवित भएको भए राष्ट्रपतिका कामलाई के भन्थे होलान डा. रावल « Anumodan National Daily
सुख्खड /नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज डा. भीमबहादुर रावलले मदन भण्डारी जिवित भएको भए राष्ट्रपतिका कामलाई के भन्थे होलान भनेर प्रश्न गरेका छन ।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सुख्खडमा आयोजित सभामा उनले भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लोकतन्त्र र संविधान मिच्न लागेका छन् ।
नेता रावलले भने सुदूरपश्चिमको माया लागेर चार मन्त्री बनाइएको होइन, पार्टी कसरी फुटाउने भनेर हो । उनले थपे संसद हुँदा १६ मा १४ जित्ने सुदूरपश्चिमको बेवास्ता गरियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले काम गर्न दिएनन् त्यसैले प्रतिनिधि सभा विगठन गरे भन्छन् उनले भने हामीले गोकर्ण रिसोट, ह्यात रिजेन्सी , कोरोना महामारीको भ्रष्टचार र ७० करोड टेप काण्डको विरोध गरेका हौ ।
उनले जनहीतमा काम गरौ भन्दा झापामा १५० करोडको भ्यु टावर बनाउन थालिएको समेत उल्लेख गरे ।
नेता रावलले भागीरथी भट्टका हत्यारा पत्ता लगाउन समेत आग्रह गरेका छन् । सरकारले निर्मला पन्त र भागिरथीका हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गर्दे उनले भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले हत्यारा पत्ता लगाउन कुनै चाँसो राखेका छैनन् ।
फरक प्रसंगमा उनले टीकापुर घट्नाका क्रममा आफूले सम्झाएर रेशम चौधरीलाई सद्भाव कायम गर्न लगाएको बताए । नेता रावलले भने मैले रेशमलाई भने देश रहे मात्र हामी रहन्छौ थारु, बाहुन, क्षेत्री त पछि भएका हुन भनेर सम्झाए ।
नेपालगञ्जबाट टीकापुर आउदा पक्राउ नगर्न कैलाली र बाँकेका सिडियोहरु समन्वय गरे । तरपछि रेशम कता हराए सम्पर्क भएन । रेशमले मलाई अंकल भन्थे त्यसैले मैले वावु भनेर सम्झाएको थिए डा. रावलले भने ।
सो अवसरमा डा. रावलले तीन वर्ष अघि स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय पार्टीले नमान्दा नमान्दै पनि पढे लेखेको भनेर इन्चार्जका हैसियतले घोडाघोडीको मेयरको उम्मेदवार बनाए तर अहिले अहिले उनले पार्टी मात्र होइन ताल तलैया र सार्वजनिक जग्गा समेत हडपेमा दुख मनाउ गरे ।
उनले भने म समेत यहाँ आएर भोट मागे अहिले गलत मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएर भोट मागे छु भन्ने लागेको छ त्यसैले माफी माग्न चाहन्छु ।
सो सभालाई नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष भानुभक्त जोशी, सचिव नेपबहादुर चौधरी लगायतले सम्वोधन गरेका थिए ।